किन निदाउँछ हातखुट्टा ? – ramechhapkhabar.com
प्रायः मानिसको लामो समय एकै पोजिसनमा बस्दा, केहीबेर थिचिँदा वा अन्य कारणले पनि कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाउने वा झुम्म हुने गर्दछ । खुट्टा निदाउँदा एकछिन त पीडा हुन्छ र उभिन वा हिड्नसम्म सकिदैंन । तर केहीबेर पछि यो आफै हराएर जान्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?
धेरैलाई लाग्दछ, खुट्टामा पर्याप्त मात्रामा रक्तसञ्चार नभएका कारण यो निदाउने वा झुम्म हुने गर्दछ । तर खुट्टा रक्तसञ्चारका कारणले नभई नसाका कारण निदाउँछ । हाम्रो शरीरमा तारजस्तै साना नसा हुन्छन् । जो दिमाग र शरीरका हिस्साबीच सन्देश लैजाने काम गर्छन् ।
यस्तोमा लामो समयसम्म खुट्टाको सहायताले बसियो भने त्यसबेला त्यहाँको नसामा दबाब पर्छ । यस्तो शरीरका अन्य भागमा पनि हुन्छ । धेरैले लामो बसाईका बेला यस्तो अनुभव गर्छन् । यो लामो समयसम्म दबाब रहदा शरीरका अंगमा दबाब पर्दा ती अंग निदाउँछ ।
नसाहरु कोशीय फाइबरबाट बनेको हुन्छ । प्रत्येक कोशीय फाइबर अलग–अलग संवेदनालाई मष्तिष्कसम्म पुर्‍याउँने काम गर्छन् । जतिबेला यसमा दबाब पर्छ मष्तिष्कसम्म नसाले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन वा रक्तसञ्चार गर्न सक्दैन र दिमागसम्म उक्त अंगको बारेमा पुग्ने जानकारी रगत वा अक्सिजन अभावमा अवरुद्ध हुन्छ ।
यही कारण त्यहाँ संवेदना महसुस हुँदैंन र त्यो अंग निदाउँछ । पछि उक्त अंगमा दबाब हट्दा पुनः रगत वा अक्सिजन सञ्चार नियमित हुन्छ र अंग पुनः संवेदनशिल हुन्छ ।